सामाजिक विभेद र अन्याय बिरुद्द लड्ने छु : दाङकी मिस नेपाल प्रतियोगी डा. केसी - Rajmarg Online
दाङ, ११ मंसिर । मिस नेपाल २०२० को प्रतियोगितामा फ ाइनल चरणमा पुग्नुभएकी दाङकी चेली डा. निगाता केसीले आँफू सामाजिक विभेद र अन्याय बिरुद्द लड्ने बताउनुभएको छ ।
मिस नेपालाई सुन्दरी प्रतियोगिताको रुपमा मात्र नबुझ्न उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘यो एउटा व्यक्तित्व विकास र क्षमता मापन गर्ने प्रतियोगिता हो।’ मिस नेपाल बन्ने चाहना सबैमा हुनु स्वभाविक भएपनि यसका लागि चुनौति पनि उत्तिकै भएको बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा एसीड आक्रण भई पीडित हुनेहरुको संख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दे उनीहरुको उपचार गरेर पुनर्जीवन प्रदान गर्ने आफ्नो लक्ष्य भएको बताउनुभयो । ‘अहिले विशेष गरेर छोरीहरु माथि एसीड आक्रण भइरहेको छ, उनीहरुको जीवन वर्वाद भइरहेको छ,’ डा. केसीले भन्नुभयो ।
अहिले पनि नेपाली समाजमा विभिन्न खाले विभेद र महिलाहरु माथि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै आँफू त्यसका विरुद्ध सशक्त भएर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ‘सुन्दर समाज निर्माणका लागि हामी सबैबिच सहकार्य हुन जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो समाज राम्रो बनाउने हामी आँफैले, कोही बाहिरबाट आएर हाम्रो समाज बनाउँदैन ।’ भविष्यमा समाज रुपान्तरणका लागि आँफू निरन्तर लागिरहने डा. केसीले बताउनुभयो ।
डा. निगाता केसीलाई जिताउनका लागि दाङ लगायत विभिन्न जिल्लाबाट जिताऔं अभियान शुरु गरिएको छ । दाङमा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनको संयोजकत्वमा जिताऔं अभियान शुरु गरिएको छ ।
संयोजक प्रियासनिले डा. निगाता हामी सबै पश्चिम नेपालका जनताको गौरव भएकाले विजय गराउन आआफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हाम्रो सानो सहयोगले यस क्षेत्रकै इज्जत बढ्ने भएकाले डा. निगातालाई भोट गर्न आग्रह गर्नुभयो । डा. निगाताका बुवा विष्णु बहादुर केसीले आफ्नी छोरी डा. निगातलाई विजयी गराउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निगाता आफ्नी मात्रै नभएर सबै कि छोरी भएकाले हौसला प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
Posted in Unknown_news, प्रदेश विषेश, मनोरञ्जन
Prevघोराहीमा लैंङ्गिक हिंसा बारे अन्तरक्रिया
Nextनेपालमा १६१४ जना कोरोना संक्रमित थपिए, २३ जना संक्रमितको मृत्यु